Maxay tahay inuu adeegsade Windows ka ogaado GNU / Linux? | Laga soo bilaabo Linux
Kuwa badan oo aan isticmaalno GNU / Linux waxaan ku wareegeynaa wacdinta our Nidaamka hawlgalka iyo guud ahaan waxaan marwalba kahadalnaa isla shay: Kawaran haduu fayrasyo, kawaran haduu bilaash yahay, kawaran haduu furanyahay ... iwm
Tani ma waxa kaliya ee isticmaalaha Windows ama OS kale? Qayb ahaan haa, laakiin maahan wax walba. Aan aragno waxyaabo aan tixgelinayo, waa inay bartaan dhammaan adeegsadeyaasha ku cusub GNU / Linux.
1 Waa maxay GNU / Linux?
2 Qof walba waxbaa jira
3 Nidaamka Faylka iyo Qaybaha
4 Terminal? Sidee uxun tahay !!!
5 Gudahoodu Maxay yihiin? Maxay u yihiin
6 In kabadan hal Degaan Desktop
7 Keydinta iyo kutiirsanaanta: Eeg hooyo ma haysto .EXE
8 Aaway dejintaydii?
9 Ma sameyn karaa wax la mid ah Windows-ka?
10 Adigu ma tihid Maamulaha (Haddii aadan rabin.)
11 La wadaag, sii.
12 Ku rakib oo waxaad arki doontaa in wax waliba shaqeeyaan.
13 Laakiin aan weligeed ahayn in dhalaalayaa waa dahab.
Waa maxay GNU / Linux?
Horeba saaxiibkeen Perseus ayuu qoray maqaal aad u fiican guud ahaan kahadalka waa maxay GNU / Linux. Laakiin iska jir, marar badan waxaan dhahnaa: "Waxaan isticmaalaa Linux", marka xaqiiqda ay tahay inay noqoto: "Waxaan isticmaalaa GNU / Linux". Markaan adeegsaneyno wax qeybin, waxaan isticmaaleynaa Kernel (Linux) iyo codsiyo kale oo badan oo mashruuca ah GNU. Qofna ma isticmaalo kaliya Linux (firida).
Qof walba waxbaa jira
Qaybinta GNU / Linux waxaa jira wax loogu talagalay dhadhanka oo dhan iyo dhadhan kasta. Waxaan ka heli karnaa tan ugu fudud xagga rakibaadda iyo qaabeynta (Ubuntu, LinuxMint, openSUSE, Debian) qaar ka sii adag (Archlinux, Chakra, Slitaz) xitaa kuwa ugu dhib badan (Gentoo, Slackware).
Waxaan sidoo kale haysannaa fursado badan oo ku xiran Qalabka aan haysano. Waxaa jira qaybsiyo aad uyar oo kala duwanaan kara iyadoo kuxiran Deegaanka Desktop in aan isticmaalno.
Nidaamka Faylka iyo Qaybaha
Waxaan u maleynayaa barta ugu muhiimsan marka la isticmaalayo GNU / Linux Waa waqtiga rakibidda iyo qaybinta saxannada, lana garanayo sida Nidaamka faylka. Perseus markale na siiyay maqaal qurux badan oo ku saabsan mowduucan, laakiin waxaan soo koobi karnaa in isticmaalaha Windows-ka waa inuu ogaadaa "guud ahaan" gudaha GNU / Linux 3 qoruhu waxaa loo isticmaalaa:
<° - Risaalo ugu horeysay ee loogu talagalay xididka (/) taas oo u dhiganta disk C:
<° - Qaybta labaad ee guri (/ guri) taas oo u dhiganta disk D:
<° - Qaybta saddexaad ee Kala beddel taas oo u dhiganta xusuusta dalwaddii.
Sidoo kale waa inaad taas ogaataa qormooyinkan lama isticmaalin NTFS o Fat32 (in kasta oo noocyada noocan ah la heli karo). Waxaan u isticmaalnaa "guud ahaan": Ext2, Ext3 iyo Ext4, waana ansax in la caddeeyo in iyagu ayan ahayn xulashooyinka keliya ee aan haysanno.
Terminal? Sidee uxun tahay !!!
In kasta oo xaqiiqda ah in adeegsadayaal badani ay ka baqayaan terminal-ka, haddana dhammaanteen waan ognahay inuusan qaniinin, taa bedelkeed, waxay badanaa nolosha ka dhigtaa mid fudud. Qaybinta GNU / Linux la’aanteed a Emulator-ka Terminal-ka. Marka aad barato isticmaalkeeda, ma noqon karno la'aanteed.
Wax walba oo aan ku sameyn karno garoonka "guud ahaan" waxaa lagu sameyn karaa codsiyo muuqaal ah ama taa beddelkeeda waana muhiim in loo adeegsado khaladaadka khaladka ama laga helo macluumaadka Nidaamka. Markuu barnaamijku rabin inuu bilaabo, dhaqanka wanaagsan ayaa ah inuu maamulo ama ka soo waco boosteejada si loo arko qaladka ay la soo noqotay.
Gudahoodu Maxay yihiin? Maxay u yihiin
Mid ka mid ah farqiga u dhexeeya GNU / Linux y Windows, taas oo aan marwalba liis garaynno, waa inaan xakameyno kuweenna Nidaamka hawlgalka. Maxaan ugu yeeraa xakamaynta? Hagaag, si fudud oo aan ku ogaan karno waxa nidaamkeena uu ku qabanayo munaasabado kala duwan, ama ka sii wanaagsan, in hadii qalad dhaco aan arki karno waxa sababay. Sidee? Waa hagaag la Diiwaanka Nidaamka.
Ii aamin, markii aan bartay waxa looxa ahaa, 90% dhibaatooyinkeyga waa la xaliyay. Diiwaanada ayaa ah, aan dhahno, nooc rikoor ama taariikh ah oo ina tusaysa waxa ka socda barnaamijyada qaarkood ama nidaamka per se.
Xaqiiqda fudud ee isku xirka fiilada shabakadda ama ka-goynta tusaale ahaan, waxaa lagu duubay log. Bilowga our Nidaamka hawlgalka waxaa lagu duubay log, iyo codsiyo badan ayaa lagu duubay ficiladooda galka. Faylashaas "guud ahaan" ayaa lagu kaydiyaa diiwaanka / var / log halkaasna waan kala tashan karnaa haddii aan dhibaato la kulanno.
In kabadan hal Degaan Desktop
Si ka duwan Windowsin GNU / Linux waxaan isticmaali karnaa wax kabadan hal Deegaanka Desktopxitaa waa la rakibay iyadoon midkoodna kan kale saameyn. Laakiin way fiicantahay in la cadeeyo taas Uma baahnin Desktop si aan ula shaqeyno GNU / Linux.
El Deegaanka Desktop shaqo kuma laha hawlgalka saxda ah ee Nidaamka hawlgalka. Si fudud waa "garaaf" hab loo maareeyo, marka la yiraahdo. Hadda in la helo a Deegaanka Desktop waa lagama maarmaan in la rakibo a Server Graphic, taas oo guud ahaan ah Xorg.
Isticmaalayaasha cusub si ay tan u fahmaan xoogaa, aan eegno garaafka soo socda:
Raacida amarka lagu muujiyey garaafka:
Bilow Kernel, oo mas'uul ka ah maareynta, iyo waxyaabo kale, Qalabka la heli karo iyo qalabka durugsan (Mouse, Keyboard ... iwm). Tani waxay u baahan tahay dukaamada buugaagta iwm.
Kadib Adeegyadu way bilaabmayaan (Ex: Macluumaadka keydka macluumaadka, barnaamijyada barnaamijyada iyo kuwa kale).
Mar dambe ayaa Server Graphic. La'aantan server la'aan ma awoodi doonno inaan ku aragno daaqadaha ama menus-ka dusha sare ...
Ugu dambeyntii wuxuu bilaabaa Maamulaha kal-fadhiga (Ikhtiyaar haddii aan isticmaalno bilawga) taas ayaa na geyn doonta Deegaanka sawirka in aan rakibnay markii aan dhignay magaca isticmaale iyo lambarka sirta ah.
El Nidaamka hawlgalka iyo Deegaanka DesktopIn kasta oo ay qaraabo yihiin, haddana waa waxyaabo kala duwan. Taasi waa sababta haddii qalad ku yimaado Deegaanka Desktop, sida caadiga ah tani ma saameynayso Kernel iyo kaliya dib u bilowga ah Server Graphic (xaaladaha qaarkood) waan hagaajin karnaa.
Keydinta iyo kutiirsanaanta: Eeg hooyo ma haysto .EXE
En GNU / Linux aad bay u badan tahay in la isticmaalo Keydadka bakhaarada - taas oo aan ka badnayn riwaayadaha softiweerka ah ee abaabulan, qaabaysan oo lagu soo ururiyay server- si loo rakibo barnaamijyadeena Maxaa naxdin leh oo ku saabsan habkan adeegsadayaasha cusub? In isticmaaleyaasha Windows-ku ay ku habboon yihiin inay ku rakibaan binaries (.exe) tanina waxay leedahay "guud ahaan" wax kasta oo lagama maarmaan u ah in software-ka uu ku shaqeeyo.
Marka laga hadlayo GNU / Linux waxaa jira baakado ay haa tahay, iyagu waa la rakibi karaa iyaga keligood waxna ma dhacaan, laakiin guud ahaan, badankood waxay u baahan yihiin xirmooyin kale (dukaamada buugaagta iyo wixii lamid ah) taas oo noqota ku tiirsanaanteeda. Taasi waa sababta haddii qof uu doonayo tusaale ahaan, LibreOffice waayo, Windows, kaliya waa inaad soo dejiso a .exe iyo voila, laakiin haddii aad rabto Debian, Waxaan u lahaa inaan kala soo bixi a kubbadda cagta ka buuxo .deb, ama kala soo bax xirmo kasta keydka bakhaarada ay ku tiirsan tahay. Maaha inay tani dhib ku tahay si kasta ha noqotee, laakiin aan dhahno waa xoogaa dhib badan.
En GNU / Linux waxaan leenahay binaries la mid ah .exe, xitaa codsiyada kuu oggolaanaya inaad ku rakibto binaries kuwan adigoo gujinaya laba jeer oo fudud Halkan waxaan ku tusayaa dhowr tusaale oo ah sida aan ku heli karno binaries:
buluug.deb - Qaybinta ku saleysan Debian (Ubuntu, LinuxMint, Dreamlinux ... iwm)
buluug.pm - Qaybinta ku saleysan RedHat ama nidaamkeeda xirmo (Fedora, openSUSE ... iwm)
buluug.pkg.tar.xz - Qaybinta ku saleysan archlinux (Chakra, ArchBang ... iwm)
buluug.tar.gz ama bluefish.tar.bz2 - Guud ahaan waxay ka shaqeysaa qeybinta kasta maadaama ay tahay inaan soo uruurino.
Markaan u qaabeyno macmiilka boostada ama biraawsarka, dhammaan kuwa isticmaala qaabeynta ayaa lagu keydiyaa annaga / guriga (u dhiganta disk D :) ama sida qaarkeen ugu yeeraan, kaayaga Fayl shaqsiyeed. Ka soo horjeedka waxa ku dhaca Windows, nooca noocan ah waxaa lagu keydiyaa Disk C: (Documents and Settings ..).
Dejinta waxaa lagu keydiyaa fayl qarsoon oo dhexdeena ah / guriga Badanaa waxaa lagu magacaabaa arjiga kadib. Tusaale ahaan, dejinta ee Thunderbird, emayllada la helay, liisaska xiriirka iyo kuwa kale ayaa ku keydsan /home/usuario/.thunderbird.
Tani waxay keeneysaa faa'iidooyin badan, maadaama haddii aan u baahanahay inaan dib u cusbooneysiino OS-gaaga, waxaan kaliya u baahanahay inaan qaabeyno qaybta xididka, ka tagista / guriga dhawrsan, oo markaan dhammeyno waxaan heleynaa doorbidyadeena. Tan waxaan si faahfaahsan ugu sharaxayaa maqaalkan.
Ma sameyn karaa wax la mid ah Windows-ka?
Jawaabtu waa SI iyo xitaa inbadan. Waxaan qaban karnaa hawlo isku mid ah oo aan u baranay inaan si caadi ah u qabanno: Daalaco, La sheekaysano, Qor dukumiinti, Ciyaar, Dhageyso muusikada, Daawasho fiidiyoow, Wax ka beddel sawirada, La shaqeyso kombuyuutarkayaga.
Iyagu waa isla isla tuuryo kumbuyuutar waxyaabaha ugu badan: [Ctrl] + [C] nuqul ka, [Ctrl] + [V] si aad u dhajiso ... iwm Dhamaan GNU / Linux waa mid aad loo habeyn karo, laga soo bilaabo tuullooyinka kumbuyuutarka illaa muuqaalka desktop-ka.
Adigu ma tihid Maamulaha (Haddii aadan rabin.)
Taas oo ah la shaqeynta akoonka Maamulaha sida Windows XP: iska ilow !!! Maaha taasi inaysan noqon karin, laakiin marka la eego sidaas maahan. Isticmaalayaasha waxay leeyihiin akoonadooda oo leh xaddidaadyo howlaha Maamulka (sida ku cad distro maxaa yeelay Ubuntu…. sidoo kale ..) iyo guud ahaan, inaad wax ku yeelato wax nidaamka ka mid ah waxaad u baahan tahay aqoonsi leh rukhsad maamul.
La wadaag, sii.
Iska ilow xumaanta EULAs. Waxaad ka qaadan kartaa iso-soo-saarkaaga Ubuntu ama wax kale oo disto ah oo amaahda, siiya, ama ku rakib isla nuqul dhamaan mashiinada aad rabto. Ama hadaad rabto inaadan rakibin, waa inaad ku shubtaa LiveCD ama Flash Memory.
Ku rakib oo waxaad arki doontaa in wax waliba shaqeeyaan.
Badanaa, waad iska hilmaami kartaa diskiga wadaha ah ee looxyadaada ama wixii qalab kale ah. Waa rakib oo bilaw isticmaalka. GNU / Linux wuxuu u maareeyaa qalabkaaga PC-ga si la yaab leh (illaa waxa ku dhacaya qodobka xiga).
Laakiin aan weligeed ahayn in dhalaalayaa waa dahab.
In kastoo GNU / Linux waxay leedahay waxyaabo badan oo wanaagsan, sidoo kale waxay leedahay qaar aad u xun. Khaladka ma ahan Nidaamka sidan oo kale, dhinacan arrimo badan ayaa soo galaya oo aan ku soo koobi karno danaha muuqda ee Shirkadaha qaarkood: Lacag, Monopoly iyo asxaabtooda yar. Taasi waa sababta aan u heli karno, xaaladaha qaarkood, dhibaatooyin ku saabsan Qalabka qaarkood ama in aysan jirin codsiyo si ballaaran loo isticmaalo oo ku saabsan xirfadda ama ganacsiga. Laakiin bannaanka tan, waxaan had iyo jeer ka heli karnaa baddal ama xallin dhibaatooyinkeenna.
Qalooca waxbarashadu sidoo kale ma aha mid aad u hooseeya, laakiin dhab ahaantii kama sarreyso gabi ahaanba. Waxaa jira tan oo dukumiintiyo ah, fagaareyaal caawimaad ah, kanaallo IRC, baloogyo, boggag iyo inbadan, oo ay ka buuxaan isticmaaleyaal doonaya inay ku caawiyaan.
Waxaan u maleynayaa inay tahay sida ugu fiican ee lagu ogaan karo GNU / Linux waxay galaysaa adduunkooda. Waxyaabahan aan hadda idhi oo dhan, waxaad baranaysaa waqti ka dib. Waxaan isticmaalayey in kabadan 5 sano mana aanan dhiman, taa bedelkeed, waxaan bartay kuna koray saynisyahan kumbuyuutar. Furaha ayaa ah in aan laga hor istaagin isbedelka, in la isku dayo waxyaabo cusub oo wax laga barto.
Maxaa kale oo dadka isticmaala Windows u baahan yihiin inay ogaadaan?
strong / li Ku rakib oo waxaad arki doontaa in wax waliba shaqeeyaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Lagu taliyay » Maxay tahay inuu adeegsade Windows ka ogaado GNU / Linux?
Wooow, muddo dheer ayaad Linux ku jirtay, dhawaan uun sanad iyo badh ayaan joogay.
Maqaal aad u wanaagsan, hambalyo!
Mahadsanid 😀 Hagaag haa, waxaan joogay mudada dheer the
Sannad iyo badh iyo Slackware? Fuck waxaan haystaa 3 waxaanan dhex maray Slackware
Slackware wuxuu ahaa mid ka mid ah waxyaabihii ugu horreeyay ee aan rakibo, way adkayd oo jahwareer buu ahaa laakiin sidoo kale waxay ahayd daaweyn naxdin leh, intaas ka dib waxaan ka baqay baqdinta qalabka iyo wax kasta oo LOL
Hambalyo sxb O_O ', waxay ahayd wax fiican inaad sii deysay waxa ku jira xabadkaaga xabadka xabadka ee XD, ha joojin inaad ku kacdo 😉
Waad mahadsan tahay .. Laakiin gadaal kama harsanaysid 😀
Qaybinta ugu horreysa ee GNU / Linux waxaan isku dayay waxay ahayd Mandrake 8.1 (maanta Mandriva), waxay ahayd sanadkii 2001 waxayna sifiican uga shaqaysay Pentium hore oo leh 133 Mh iyo 32 Mb oo RAM ah. Haddii qof ii sharxi lahaa oo uu ii soo koobi lahaa waxaas oo dhan si karti leh sidaad adigu u sameysay oo kale, waxaan badbaadin lahaa saacado badan oo aan ku quusto buugaagta xilligaas yaalla. In kasta oo ay xasilloonayd, haddana wakhtigaas weli waxa jiray taageero yar oo xagga qalabka ah iyo codsiyo yar, laakiin waxaan aad ula dhacay deggenaanshihiisa, in kasta oo ay daruuri igu qasabtay inaan in muddo ah isticmaalo damqashada XP, haddana marwalba waxaan hayaa qayb qayb ka mid ah qaybinta xiisaha leh.
Waxaan kuugu hambalyeynayaa maqaalkaaga, haddii aan wali isticmaali lahaa nidaamka kale waxaan u beddeli lahaa Linux ka dib markaan akhriyo.
OO Pentium leh 133 Mhz iyo 32 Mb oo RAM ah? Cajiib. Waxaan rabaa in kumbuyuutarkaygu inuu mar kale ku ordo taas si habsami leh 😀
Sida had iyo jeer, maqaal aad u wanaagsan, had iyo jeer way wanaagsan tahay in la xasuusto sababaha aan u adeegsanno Linux, runta kuwa u janjeera inay dadka xirxiraan sida ugu fiican waa arrinta darawallada, xaqiiqda ah in inta badan disros ay isla markiiba ogaadaan dhammaan qalabkaaga waa waxa ugu fiican ee la xuso, khaasatan haddii isticmaaluhu uusan u helin mawduuca barnaamijka bilaashka ah sabab macquul ah ama uusan ahayn mudnaan.
Xusuusin ahaan, anigu kuma aanan dhigeyn Chakra qaybta "qaar aad u adag", waxaan u arkaa inay fududahay rakibideeda iyo qaabeynteeda sida Ubuntu, OpenSUSE, Mandriva, Mint ama Fedora, runtiina taasi waa ujeedkeeda.
Uma jeedo kaliya rakibidda, laakiin qaabeynta .. ..
Dhibaatadu waxay tahay, sidaan u fahmay, rakibayaasha Chakra (gaar ahaan qaybinta iyo qaybta HDDs) maahan tan ugu fudud adduunka. Waxaa laga yaabaa inaysan run ahayn, anigu garan maayo, waa waxa aan akhriyay 🙂
Doorashada qormooyinku waa waxa ugu fudud adduunka, runtiina way ka sahlan tahay tan Ubuntu, dhibaatadu waxay timaaddaa markaad rabto inaad kala-baxdo, taasna waa in qabiilku uusan wali lahayn qayb-qaybiyaha, waana sababtaas sababta uu u furmay waallida maareeyaha ' taas oo mayl ka fog sida gparted, runtiina mararka qaarkood waxay u qaybisaa marna ma aha, waxay ku waashaa LOL
Cajiib waan jeclahay maqaalka iyo in waxa ugu horeeya ee la baro adeegsade markuu u guurayo GNU / Linux ay tahay inaan ku dhawaaqo, waan ku raacsanahay gebi ahaanba.
si daacadnimo leh jawharad maqaalkaaga iyo sidoo kale dhammaan qorayaasha degelkan. 😉
Aad baad u mahadsantahay saaxiib, aad baan ugu faraxsanahay markaan arkay in dadaalkayagu miro dhal yahay 😉
Waxaad ka maqantahay mid aad muhiim u ah qeybtaas: Ubuntu
Inta soo hartay, qofkii doonaya wax inuu wax ku kaco, haddii uusan rabin inuu wax barto markaa inuu kufsado
Macluumaad aad u fiican, waxaan kaliya la jiray laptop-kayga mudo 3 bilood ah si aan ugu isticmaalo Ogareño
warbixin fiican Elav, xitaa waxaad gelisay dareen sentimiento
Wuxuu u sameeyay asaga oo ka fikiraya saaxiibkiis yar
Qoraal wanaagsan, Elav.
By the way, waxaan soo dejiyey Chakra-tii ugu dambeysay, markaa hadaad xiisaynayso inaad isku daydo oo aad rabto inaad keydiso daahitaanka soo dejinta, kaliya waa inaad ka booddaa shaqada oo aad nuqul ka sameysataa.
Dhibaatadu waxay tahay in Chakra ay isticmaasho KDE oo anigu anigu aad uma xiiseeyo deegaankan desktop-ka hadda, markaa waan ka tegayaa wakhti kale. Si kastaba ha noqotee, waad ku mahadsan tahay 😀
Isku day LiveCD
qorraxda wilber dijo
Waad salaaman tahay, fiiri, waxaan doonayay inaan ku dhex luuqeeyo Linux, laakiin guud ahaan hal sabab ama mid kale waxaan ugu laabanayaa daaqadaha Imperialism, tusaale ahaan markii iigu dambeysay ee aan ku laabto maxaa yeelay shaqadeyda waxaan ku isticmaalaa Skype laakiin kama aanan dhigi karin inay ku socoto Ubuntu 11.04 markasta oo aan galo oo aan isku dayo inaan isticmaalo, way barafoobi laheyd, miyaad iga caawin kartaa qaladkaas ………… oh anigu waxaan ahay isticmaale nool oo gariir ah midna, aadna waan u bogi lahaa caawintaada
Ku jawaab jawaabahan
Isku day Ubuntu 10.04, ama LinuxMint 12.
Waan ka xumahay waxay la jirtay Ubuntu 11.10
Marka hore, waa maxay nidaamka hawlgalka ee KALE.
Ta labaad, inaad ubaahantahay inaad aqriso si aad u awoodo inaad u isticmaasho una xalliso waxa laguu soo bandhigay.
Waxaan ka hadlay isticmaalka GNU / Linux, dadka badankooduna waxay filayaan inay la mid noqoto daaqadaha, oo ay awoodaan inay adeegsadaan isla barnaamijyada ama aaladaha ay adeegsadaan.
Laakiin, inta badan faallooyinka "lagu wacdiyo", kama aanan akhriyin wax sheegaya waxa aan sheegayo.
Qoraal aad u fiican ayaa i siinaya macluumaad aad u fiican. Xaqiiqdii waxaan u wareegay GNU / Linux 5 bilood ka hor aadna waan u fiicanahay.
Jawaab Bayron Ortiz
5 sano !! Mamma mía… Hal bil uun baan dul saarnaa !! Sidee cajiib ah intee in le'eg ayaa laga baran karaa «ka socda Linux» ... Waooo, waad ku mahadsan tahay ka qaybgalka 😀
Jawaab Edgar Kchaz
Waooo 5 sano jir ah waxaan ku faraxsanahay bisha iigu horreysa !! Waa wax layaableh inta aad wax ku baran karto kuna hormarin karto nidaamkan…. Cajiib ... Oo waxa ugu fiican waa "laga bilaabo Linux" 😉 ... Waad ku mahadsan tahay ka qayb qaadashada ...
Qoraal aad u wanaagsan; Waxaan arkaa inaad qortay in kabadan sanad ka hor, sikastaba ma aanan rabin inaan seego fursada aan kuugu hanbalyeeynayo
Dhowr bilood ayaa laga joogaa tan iyo markii aan go'aansaday inaan tijaabiyo OS ku saleysan GNU / Linux, runtuna waxay tahay kadib markaan ka gudbay cabsidii ama diidmadii i siisay tallaabadaas, waxaan ku faraxsanahay khibradda. Muddo dheer ayuu ku mashquulsanaa mawduuca; Markii hore, waxa igu kalifay waxay ahayd falsafada softiweerka bilaashka ah, laakiin waxaan u maleeyay (dabcan, wax walba waa cuqdad adduun) in khibrada adeegsaduhu noqon doono mid hawl badan oo xoogaa adag. Xaqiiqdii, waxay ahayd mid ka soo horjeedda, geeddi-socodka barashada (iyo wixii aan ka tagay!) Aad ayey u abaalgud badneyd.
Inta badan waxyaabihii aan kaga hadlay qoraalkan aniga ayaa aqaan (iska jir! Mawduuca diiwaanku wuxuu ahaa daah-fur yar) waxayna ahaayeen waxyaabihii ugu horreeyay ee aan ka barto GNU / Linux, waana sababta aan ugu malaynayo Maqaalka ayaa aad ugu habboon dhammaan kuwa aan go'aan ka gaarin inay u dhaqaaqaan barnaamijka bilaashka ah iyo OS-ga bilaashka ah.
Ku jawaab Zal75
Ma doonayo inaan u dhawaaqo sida rajo xumada, laakiin waxaan si daacad ah u aaminsanahay in qof kasta oo doonaya inuu isticmaalo GNU / Linux uusan u baahnayn "in lagu wacdiyo" kuwa kalena waa inay ka waantoobaan isticmaalkiisa, waan dhageystay dhammaan waxayaabaha la is weydiinayo waana sidoo kale isku dayay inuu fahmo sababahooda. Mana aqaano idinka rag laakiin waxaan bilaabay inaan u adeegsado gaajo ah inaan waxbadan ogaado iyo waxaan ku dhameeyay inaan jeclaado xorriyadeeda si ay u awoodaan inay sameeyaan wax walba oo malahayga i farayo.
Xaqiiqdii kuma qaadan waqti dheer in la isticmaalo. si joogto ah oo keliya 3 sano iyo 4 iyadoon maalin kasta la isticmaalin. Anigu khibrad uma lihi sida badan sidoo kale. badankooduna waxay ku jiraan debian iyo ubuntu noocyo kala duwan, iyo sidoo kale noocyo kale oo kala duwan.
Ku jawaab Greck
«Dhammaan waxa dhalaalayaa maahan dahab», waxay kaloo noqon kartaa dheeman <- Hahahaha maqaal wanaagsan 🙂
Jawaab Juan Pablo Lozano
Nidaamka qalliinka ee ku saleysan GNU / Linux distros waa sida nidaamyada kale: Wuxuu leeyahay guulo badan, faa'iidooyin iyo waxyaabo aad u wanaagsan, laakiin sidoo kale wuxuu leeyahay khaladaad, faa'iido darro iyo dhibaatooyin. Anigu waxaan ahay tijaabiye oo la dhacsan Linux disros-ka ugu caansan, illaa toddobo sano hadda kamana cawdo adeegyada iyo faa'iidooyinka aan helay, gaar ahaan barnaamijyada bilaashka ah iyo barnaamijyada bilaashka ah ee ay wali bixiyaan. Mahadsanidin waxaan u mahadcelinayaa soosaarayaasha kala duwan ee 'GNU / Linux distro'. Sanadkii la soo dhaafey waxaan isku dayey Mageia, Ubuntu, Deeping Linux, Fedora iminkana waxaan la joogaa Linux Mint 15 waxaanan ku noolahay si farxad leh, in kastoo waqti ka waqti aan isticmaalo Windows 7.
Ku jawaab Hernando
Waxaan u diray xiriirinta maqaalkan emayl saaxiibkey si aan u aqriyo
Maqaal aad u fiican. Waxaan hayaa hal su'aal:
Kernel-ka Linux waxaa loo maleynayaa inuu adeegsado Android. Android sidoo kale ma isticmaashaa qalabka GNU? Waxaan sidaa u idhi maxaa yeelay waxaan ku arkay meelo badan, waxay xusayaan in Google OS uu yahay "uun qayb ka mid ah qoyska Linux".
Ku jawaab Janik Ramírez
Maya, ma adeegsado qalabka GNU. Sidoo kale, waxaan u maleynayaa in Android ay isticmaasho nooca asalka ah ee Linux, oo leh qaybo u gaar ah. Taabadalkeed, Gnu / Linux waxay isticmaashaa kernel linux oo la habeeyay si ay gebi ahaanba xor u noqoto.